Ndị na-emepụta igwe na-ebipụta ihuenyo & ndị na-ebunye ihe - Ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe na China
JB-780 nwere JB-800UVJ UV Dryer na JB-800S Stacker
Aihe odide ntụkwasị 1
JB-780 Full akpaghị aka Cylinder ihuenyo Pịa
JB-106AS Servo moto na-achịkwa akpaaka Kwụsị Cylinder ihuenyo Pịa
Igwe a bụ nhọrọ kacha mma maka akwụkwọ na nkwakọ ngwaahịa plastik, seramiiki na cellophane, nnyefe textile, akara ọla, ihe nkiri ihe nkiri plastik, ihe elektrọn na eletriki na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
FUll-size ọsọ: ruo 5000 pcs / h
3/4 Igwe eji ebi akwụkwọ na-akpaghị aka
Igwe a bụ akụkụ nke mbipụta,wepụ igwe setịpụ na igwe nkụ UV.Ọ bụ ahịrị akpaka 3/4 nke ejiri aka na-enye ngwaahịa obibi akwụkwọ nri,ewepụrụ na-akpaghị aka.
JB-1050AG nwere UV Dryer na Stacker
JB-1050AG Full Akpaaka Kwụsị Cylinder Screen Pịa
Isi ihe pụrụ iche:
Ọsọ dị elu na 4000pcs / h (ọkwa mbụ n'ụwa) Ogologo mpempe akwụkwọ dị elu ruru 90cm;
Isi nbipụta akwụghị ụgwọ nwere sistemu iri abụọ na nke abụọ nke mmetụ aka;
Usoro nri anaghị akwụsị akwụsị (Standard) nke nwere ike ịbawanye arụmọrụ ruo 30%.
JB-1050A Full Automatic Stop Cylinder Screen Press nakweere teknụzụ nkwụsị cylinder nke oge gboo na uru ndị dị ka: akwụkwọ dị n'otu n'otu na nke kwụ ọtọ, nkenke dị elu, ọsọ dị elu, mkpọtụ dị ala, nrụpụta ogo dị elu na ihe ndị ọzọ, ọ dabara maka ibipụta na seramiiki. na ngwa ngwa iko, ụlọ ọrụ elektrọn (mgbanwe ihe nkiri, sekit na-agbanwe agbanwe, panel mita, ekwentị mkpanaaka), mgbasa ozi, mbukota na mbipụta, ika, nnyefe textile, teknụzụ pụrụ iche wdg.
Nke bụ Kacha ọhụrụ ngwaahịa nke flat ndepụta cylinder ihuenyo pịa.
JB-1020A na JB-1050UVJW Stepless UV Dryer na ngalaba jụrụ oyi na JB-1050S
JB-1020A Full Akpaaka Kwụsị Cylinder Screen Pịa
JB-A Series Full Automatic Stop Cylinder Screen Press na-anabata teknụzụ nkwụsị cylinder nke oge gboo na uru ndị dị ka: akwụkwọ dị n'otu n'otu na nke kwụ ọtọ, nkenke dị elu, ọsọ dị elu, mkpọtụ dị ala, akpaaka dị elu na ihe ndị ọzọ, ọ dabara maka ibipụta na ya. seramiiki na iko applique, ụlọ ọrụ elektrọn (mgbanwe ihe nkiri, sekit na-agbanwe agbanwe, igwe mita, ekwentị mkpanaaka), mgbasa ozi, mbukota na mbipụta, ika, nnyefe textile, teknụzụ pụrụ iche wdg.
JB-1020 nwere JB-1050UVJW Stepless UV Dryer na JB-1050S
Ihe mgbakwunye 1
JB-1020 Full akpaghị aka Cylinder ihuenyo Pịa